लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो कन्नडा काजाक किकाओन्डे किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्षोसा गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टेटन डिली डच डेनिश तामिल तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मराठी मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुगान्डा लुभेल वारे-वारे वोलाइटा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
नेचर्स बिल्डिङ ब्लक्स भन्ने अङ्‌ग्रेजी किताबमा यस्तो लेखिएको छ: “जीवन सम्भव हुनको लागि कार्बन जत्तिको महत्त्वपूर्ण तत्त्व अरू कुनै छैन।” कार्बनमा भएका उल्लेखनीय विशेषताहरूले गर्दा यो अर्को कार्बनसित अनि अरू रासायनिक तत्त्वहरूसित टाँसिन सक्छ। यसरी टाँसिएर लाखौं यौगिक (कम्पाउन्ड) बन्छन्‌। यस्ता थुप्रै यौगिक अहिले पनि पत्ता लाग्दै छन्‌ अनि वैज्ञानिकहरूले पनि कृत्रिम यौगिकहरू बनाइरहेका छन्‌।
कार्बन साँच्चै अद्‌भुत छ! यसका परमाणुहरू मिलेर विभिन्न आकार जस्तै: सिक्री, पिरामिड, गोलाकार, पत्र र नली बन्न सक्छ। यसका केही उदाहरण तल दिइएका छन्‌। (g16-E No. 5)
हिरामा कार्बनका परमाणुहरू मिलेर बनेको टेट्राहिड्रोन भन्ने पिरामिडहरू हुन्छन्‌। टेट्राहिड्रोनको संरचना असाध्यै बलियो हुन्छ। त्यसैले हिरालाई प्रकृतिमा पाइने सबैभन्दा कडा तत्त्व मानिन्छ। शुद्ध हिरा कार्बनको एउटा मात्र अणुबाट बनेको हुन्छ।
ग्राफाइटमा एकअर्कासित कसिलो गरी जोडिएका कार्बनका परमाणुहरू पत्र–पत्र गरी एकमाथि अर्को गर्दै खप्टिएर बसेका हुन्छन्‌। तर यी पत्रहरूको जोडाइ भने कमजोर हुन्छ। जसले गर्दा यी पत्रहरू चाङमा राखिएको कागजजस्तै सजिलै चिप्लन सक्छ। यस्ता विशेषताहरूले गर्दा ग्राफाइट चिल्लो पार्ने पदार्थ र सिसाकलमको मुख्य यौगिक बन्न गएको छ। *
ग्राफिनमा कार्बनका परमाणुहरू षड्‌भुज आकारका हुन्छन्‌। यी षड्‌भुजहरू मिलेर जालीजस्तो एउटा पत्र बनेको हुन्छ। ग्राफिनको भार खप्ने क्षमता स्टिलको भन्दा कैयौं गुणा धेरै हुन्छ। सिसाकलमले कोरेको ठाउँमा एक पत्र वा सोभन्दा धेरै पत्र ग्राफिन हुन्छ तर थोरै मात्रामा।
फुलरिन कार्बनका खोक्रा अणुहरू मिलेर बनेको हुन्छ। यो विभिन्न आकारमा पाइन्छ। जस्तै, सूक्ष्म बल र नली। नली आकारको फुलरिनलाई नानोट्युब भनिन्छ। यसलाई नानोमिटरमा (एक मिटरको १ अरब भाग) नापिन्छ।
वनस्पति र जीवित प्राणी
थुप्रै कोष मिलेर वनस्पति, जीवजन्तु र मानिस बन्छ। हरेक कोषमा कार्बोहाइड्रेट, चिल्लो र एमिनो एसिड हुन्छ। यी तीनै वटा कुरा बन्न कार्बन चाहिन्छ।
“[परमेश्वरका] अदृश्य गुणहरू संसारको सृष्टिदेखि नै छर्लङ्‌गै देखिंदै आएका छन्‌।”—रोमी १:२०.
^ अनु.7जुलाई २००७ को ब्यूँझनुहोस्!-मा “सीसाकलम छ?” भन्ने लेख हेर्नुहोस्।
ताराहरूमा हुने उत्कृष्ट तालमेलको उपज—कार्बन
तीनवटा हिलियमको न्युक्लियस मिलेर कार्बन बन्छ। रेड जाएन्ट्स ताराभित्र यसरी नै कार्बन बन्छ भनेर वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्छन्‌। तर हिलियमहरू आपसमा जोडिन सबै कुरा ठ्‌याक्क मिलेको हुनुपर्छ। भौतिकशास्त्री पल डेभिजले यस्तो लेखे: “[भौतिक नियममा] असाध्यै न्यून कुरा मात्र फरक पऱ्यो भने पनि न यो ब्रह्माण्ड न त कुनै जीवित प्राणी नै अस्तित्वमा हुने थियो; मानिसको त झन्‌ कुरै छोडिदिऊँ।” भौतिक नियममा यस्तो बेजोड तालमेल कसरी सम्भव भयो? कोही भन्छन्‌, ‘यो संयोगको कुरा हो।’ कोहीचाहिं यसको पछाडि एक जना बुद्धिमान्‌ सृष्टिकर्ताको हात छ भन्छन्‌। यी दुईमध्ये तपाईंलाई कुन कुरा तर्कसङ्‌गत लाग्छ?